Orlistat （96829-58-2） ထုတ်လုပ်သူပေးသွင်းသူစက်ရုံ
CMOAPI သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကြီးဆုံး Orlistat အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီးတစ်လလျှင် ၁၈၀၀KG ဆံ့နှင့်အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (ISO1800) နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (၁၄၀၀၁) တို့ကိုအပြည့်စုံဆုံးပိုင်ဆိုင်သည်။
အမည် Orlistat အမှုန့်
မော်လီကျူးအလေးချိန် 495.7 ဂရမ် / mol
အရည်ပျော်မှတ် 50 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိုလှောင်ခြင်း Temp 2-8 ° C ရေခဲသေတ္တာ
လူနာများလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဘဲနေလျှင်ပင်အဆီပျော်စေရန်ဖန်တီးထားသော ၉၉.၇% ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသော orlistat အမှုန့်ကိုသုံးပါ။ CMOAPI ထုတ်လုပ်သူမှ Orlistat အမှုန့်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များပေးနိုင်သောအဆုံးစွန်သောအာမခံချက်ဖြစ်သည့် GMP နှင့် DMF အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုအောင်မြင်စွာကျော်ဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးသည်ပျော်ရွှင်သောဖောက်သည်များကိုတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်သည်၊ ရောင်းအားကိုမြှင့်တင်ပြီးအမှတ်တံဆိပ်ပုံရိပ်ကိုမြှင့်တင်သည်။
Orlistat အမှုန့်သည်လူနာများအားအ ၀ လွန်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်ရန်ကူညီသောဒီဇိုင်းဆေးတစ်ခုဖြစ်သည်၊ တက်ကြွသောဓာတ်သည် Orlistat ကိုကြီးကြပ်ထားသောလျှော့ချထားသောကယ်လိုရီနှင့်အဆီနည်းသောအစားအစာတို့နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး၎င်းသည်အဆီစုပ်ယူမှုကိုဟန့်တားနိုင်စွမ်းကြောင့်၎င်း၏ထိရောက်မှုကိုအများကြီးတိုးစေနိုင်သည်။ အစာခြေလမ်းကြောင်း၌။ ထို့ကြောင့် orlistat အမှုန့်ကိုမြင်နိုင်သောကိုယ်အလေးချိန်ကျသောစျေးကွက်များစွာသည်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုနှင့်အဆီစုဆောင်းခြင်းကိုလျှော့ချရန်အသုံးပြုသည်။ ဆေးစာအဖြစ် Orlistat ကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်“ Alli” အောက်ရှိအ ၀ လွန်ရောဂါနှိမ်နင်းရေးဆေးဝါးအဖြစ်အမှတ်တံဆိပ်အမည်“ Xenical” အောက်တွင်ရောင်းသည်။
orlistat အမှုန့်တွင်ပြုလုပ်သောဆေးခန်းလေ့လာမှုများကအရုပ်ဆိုးသောအဆီကိုချက်ချင်းလောင်ကျွမ်းစေသောအစွမ်းထက်ကိုယ်အလေးချိန်ဒြပ်ပေါင်းကိုထုတ်လုပ်ရန်သုတေသီများအားခွင့်ပြုခဲ့သည်။ သိပ္ပံနည်းကျစမ်းသပ်မှုသည်ဤအံ့သြဖွယ်ကိုယ်အလေးချိန်ရလဒ်ကိုအဘယ်ကြောင့်ထုတ်လုပ်သည်ကိုအတိအကျရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။
ဘယ်လိုမျိုး Orlistat အမှုန့်အလုပ် & အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ထူးခြားသည်
Orlistat အမှုန့်သည်အစာခြေလမ်းကြောင်းရှိအဆီများကိုချေဖျက်သောအင်ဇိုင်းများကိုပိတ်ဆို့သောရွေးချယ်နိုင်သော inhibitor တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်လိုရီအလွန်အကျွံစားသုံးပါကအဆီအဖြစ်သိုလှောင်ရန် ဦး တည်စေပြီးကိုယ်အလေးချိန်တက်စေသည်။ Orlistat အမှုန့်သည်အစားအစာမှခန္ဓာကိုယ်မှစုပ်ယူသောအဆီပမာဏကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ အစာအိမ်အင်ဇိုင်းမ်နှင့်ပန်ကရိယ lipase တို့နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းသည်အဆီအက်စစ်နှင့် monoglycerides သို့အင်ဇိုင်းများကိုတားဆီးပေးသော covalent bond ကိုဖွဲ့စည်းသည်။
အချို့သောလေ့လာမှုများကအကြံပြုထားသော Orlistat အမှုန့်ပမာဏသည် ၁၂၀ မီလီဂရမ်၊ ပိတ်ဆို့ထားသောအဆီပမာဏသည်နေ့စဉ်အဆီဓါတ် ၃၀% ခန့်ရှိသည်။ မချေဖျက်နိုင်သောအဆီဓာတ်သည်စနစ်အားဖြတ်သန်းသွားပြီးအညစ်အကြေးအဖြစ်ဖယ်ထုတ်သည်။ ၎င်းသည်အစာအိမ်နှင့်ပန်ကရိယ lipase ကိုတားဆီးခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အဆီဓါတ် (triglycerides) ကိုစုပ်ယူနိုင်သောပုံစံ၊ fatty acids (သို့) monoglycerides သို့ဖြိုခွဲသောအင်ဇိုင်းများဖြစ်သည်။
လူနာသည်အဆီပါဝင်သောအဓိကအစာကိုတစ်နေ့ ၃ ကြိမ်နှင့်အစာစားပြီးပြီးချင်းတစ်နာရီအထိ orlistat အမှုန့်ကိုရေနှင့်ရိုးရိုးသောက်သင့်သည်။ အစာစားတိုင်းမှာအဆီမှာကယ်လိုရီ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုသင့်ဘူး။
orlistat အမှုန့်သည် A, D, E, K ကဲ့သို့အဆီတွင်ပျော်ဝင်သောဗီတာမင်များစုပ်ယူမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်လူနာများသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောချို့တဲ့မှုများအတွက်လျော်ကြေးပေးရန်မှန်ကန်သောနေ့စဉ် orlistat ဖြည့်စွက်စာများစားသုံးရန်အလွန်အကြံပြုသည်။ orlistat အားဖြည့်အစာစားချိန်သည်အနည်းဆုံး ၂ နာရီမတိုင်မီသို့မဟုတ် orlistat သောက်ပြီးနောက် ၂ နာရီဖြစ်သည်။
orlistat အမှုန့်၏ဤဖော်မြူလာသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းကိုထုတ်လုပ်ရာတွင်အလွန်ထိရောက်သောကြောင့်လူနာများသည် ၂ ပတ်အတွင်းခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲလာသည်ကိုမြင်နိုင်သည်။ ရိုးရှင်းသောညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း orlistat အမှုန့်ဖြင့်သင့်တော်သောကုသမှုသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအဝလွန်ခြင်းကိုနောက်ပြန်လှည့်စေနိုင်သည်။
Ballance သည် orlistat အမှုန့်ကိုသုံးပြီးနောက်စစ်မှန်သောအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည်
Orlistat အမှုန့်ကိုဖန်တီးထားသည် လူနာများသည်အ ၀ လွန်ခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်များခြင်းကိုကျော်လွှားရန်ကူညီသည်မရ။ အန္တရာယ်ရှိသောပါးလွှာလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ တစ် ဦး ချင်းစီ၏အသုံးပြုမှုသည်အလွန်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်။ အန္တရာယ်များသောအလေ့အကျင့်တစ်ခုအဖြစ်ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
အစာစားချင်စိတ်ကျဆင်းသော်လည်း Orlistat အမှုန့်ကုသမှုခံယူနေသောလူနာများသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရများအားလုံးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မယူဘဲကျန်းမာသောအစားအစာကိုလိုက်နာရမည်။
အသုံးအများဆုံး Orlistat အမှုန့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအများစုမှာအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီးအစာအိမ်လမ်းကြောင်းမှတဆင့်မချေဖျက်နိုင်သောအဆီကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သည်။
Orlistat အမှုန့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်၎င်း၏အုပ်ချုပ်မှုပထမရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။ သို့သော်အချို့လက္ခဏာများမှာဆက်လက်ရှိနေနိုင်ပါသည်။
အချို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်မသင့်လျော်သော orlistat အမှုန့်သောက်သုံးသောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဆေးညွှန်းကိုအတိအကျလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။
၎င်းသည် Orlistat အမှုန့်ပမာဏတိုးမြှင့်ခြင်းသည်ပိုမိုအစွမ်းထက်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမဟုတ်ဘဲအချို့ဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းကိုအလေးအနက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
မေးခွန်းများရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူများသည်ဤနေရာတွင်အဖြေရှိပါသည်orlistat အမှုန့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
အဘယ်သူသည် Benefits From Orlistat Pအကြွေးရှင်လား။
1) ။Orlistat ဖြင့်အ ၀ လွန်ခြင်းကိုကုသခြင်း
ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ ၃၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၌အဆီများအလွန်အကျွံစုပုံနေခြင်းကိုခံစားနေရသဖြင့်အဝလွန်ခြင်းသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်အသိအမှတ်ပြုခံရသောအပြင်းထန်ဆုံးကျန်းမာရေးပြဿနာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ ကင်ဆာအချို့နှင့်သွေးတိုးရောဂါကဲ့သို့သောဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်များ၊ စီစဉ်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ထားသောကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းတို့လိုအပ်သည်။
အကောင်းဆုံးကတော့ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချတဲ့အစီအစဉ်မှာအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေမယ့်အစားအစာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆေးတွေပါ ၀ င်ပြီးတစ်နှစ်အတွင်းအနည်းဆုံး ၅% ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျတဲ့အခါအောင်မြင်တယ်လို့ယူဆတယ်။
Orlistat သည်ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းရည်မှန်းချက်ကိုသိသိသာသာအထောက်အကူပြုကြောင်းအစွမ်းထက်ထိရောက်သောကိုယ်အလေးချိန်ကျဆေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဝလွန်သူ ၃,၃၀၅ ဦး ပါဝင်သောလေ့လာမှုတစ်ခုသည်ကယ်လိုရီနည်းခြင်း၊ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအဆီဓာတ်စားသုံးမှုနှင့်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းတို့ဖြင့် ၄ နှစ်ကြာနေ့စဉ်သုံးကြိမ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ရလဒ်များသည်ပထမနှစ်တွင်ပျမ်းမျှကိုယ်အလေးချိန် ၁၀.၆ ကီလိုရှိသည်။ ကျိုးနွံသောကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းသည်လူနာများကိုယ်အလေးချိန်ကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ခြင်း (သို့) ဆက်လက်၍ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းအစီအစဉ်ဖြင့် ပို၍ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသည်။
2) ။ Orlistat ဖြင့်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကိုလျော့ကျစေသည်
အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါ (သို့) ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဂလူးကို့စ်ဓာတ်ကိုပျက်စီးစေသောဆိုးရွားသောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပန်ကရိယမှအင်ဆူလင်ခုခံမှု (သို့) အင်ဆူလင်မလုံလောက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေပြီး၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၌သင့်တော်သောဂလူးကို့စ်ပမာဏကိုထိန်းထားနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ရေငတ်ခြင်း၊ မလိုလားအပ်သောကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံချို့တဲ့ခြင်း၊ မကြာခဏရောဂါကူးစက်ခံရခြင်းနှင့်အနာကျက်နှေးခြင်းအစရှိသောရောဂါလက္ခဏာများကိုလျစ်လျူရှုခြင်းမပြုဘဲလျစ်လျူရှုခြင်းသည်သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းကဲ့သို့ပြင်းထန်သောနောက်ဆက်တွဲပြဿနာများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်နောက်ထပ်ကျန်းမာရေးပြသနာများကိုရှောင်ရှားရန်အချိန်မီနှင့်သင့်တော်သောကုသမှုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
အစွမ်းထက်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆေးအဖြစ် Orlistat အမှုန့်သည်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါစတင်ခြင်းကိုကာကွယ်ရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္မှပါဝင်သည်။ Orlistat အမှုန့်များသည်အင်ဆူလင်အာရုံခံနိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်။ postprandial plasma non-esterified fatty acids များကိုလျှော့ချခြင်း၊ အစာချေဖျက်ခြင်းကိုနှေးကွေးစေခြင်း၊ visceral အဆီဓာတ်ကိုလျှော့ချပေးခြင်းနှင့်အောက်ခြေအူသိမ်တွင် glucagon ကဲ့သို့ peptide-2 ကိုထုတ်လွှတ်စေသည်။
အ ၀ လွန်ရောဂါခံစားနေရသောလူနာများအားလေ့လာမှုတစ်ခုကကျန်းမာသောလူနေမှုပုံစံ (အဆီနည်းသောအစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်း) တို့ဖြင့်ကုသခြင်းကြောင့်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုသိသိသာသာကျဆင်းစေသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကြီးသောကိုယ်အလေးချိန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါခံစားနေရသောအ ၀ လွန်သူများနှင့်အ ၀ လွန်လူနာများနှင့်ပြုလုပ်သောအခြားလေ့လာမှုတစ်ခုတွင် ၆ လသို့မဟုတ် ၁၂ လကြာတစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ် Orlistat ၁၂၀ မီလီဂရမ်ပါ ၀ င်သည်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအပြင်အစာရှောင်ခြင်းပလာစမာဂလူးကို့စ် (FPG) နှင့်ဟေမိုဂလိုဘင် A2c (HbA2c) ကျဆင်းခြင်းတို့ဖြင့် glycemic ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးတက်စေခဲ့သည်။
အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါခံစားနေရသောအဝလွန်လူနာများအတွက် orlistat အမှုန့်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ပြီးကုသမှု၏ထိရောက်မှုကိုလက်တွေ့အချက်အလက်များကအတည်ပြုသည်။
3) ။ Orlistat ဖြင့်သွေးပေါင်ချိန်ထိန်းပါ
သွေးတိုးရောဂါဟုလည်းခေါ်သောသွေးတိုးခြင်းသည်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီး systolic blood pressure ≥ 130 mm Hg (သို့) diastolic blood pressure ≥ 80 mm Hg ဟုခေါ်သောကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအရွယ်ရောက်သူအားလုံး၏ ၃၀% ကျော်ကိုထိခိုက်စေသည်။ ၎င်းကိုနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်လေဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်အဓိကအန္တရာယ်အချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော်လည်းနှလုံးပျက်ကွက်ခြင်း၊ ပုံမမှန်ခြင်း၊ နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါနှင့်သတိမေ့ခြင်းတို့နှင့်လည်းဆက်စပ်နေသည်။ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောနေထိုင်မှုပုံစံများ၊ ပုံမှန်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်းနှင့်ဆီးချိုရောဂါနှင့်အဝလွန်ခြင်းကဲ့သို့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအချို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
lipase ကိုဟန့်တားသော Orlistat သည်အဆီဓါတ်စုပ်ယူမှုကိုကာကွယ်ပေးပြီးသွေးလွှတ်ကြောများကိုအနည်းငယ်ဖိအားကျဆင်းစေသည်။
လူနာ ၆၂၈ ဦး ၏သွေးပေါင်ကျစေသော orlistat ၏သက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းလေ့လာသောလေ့လာမှုတစ်ခုအရ ၁၂၀ မီလီဂရမ် Orlistat ကိုတစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်တစ်နှစ်လျှင်သုံးကြိမ်သိသိသာသာကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းစေသည်။ systolic pressure တွင် ၉.၄ mmHg လျှော့ချခြင်းနှင့် diastolic ဖိအား ၇.၇ mmHg ကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ orlistat အသုံးပြုခြင်းကိုရေရှည်တွင် systolic pressure အတွက် ၂.၅ mmHg နှင့် diastolic blood pressure အတွက် ၁.၉ mmHg ကိုလျော့ကျစေသည်။
လေ့လာမှုမှရရှိသောကိန်းဂဏန်းများသည်အ ၀ လွန်သူများ (သို့) အဝလွန်သူများအားသွေးတိုးကုသရာတွင်အကျိုးကျေးဇူးများကိုညွှန်ပြသည်။
4) ။ Orlistat ဖြင့်စုစုပေါင်းနှင့် LDL ကိုလက်စထရောကိုလျော့ကျစေသည်
စုစုပေါင်းကိုလက်စထရောသည်သိပ်သည်းဆနည်းသော lipoprotein (LDL)၊ သိပ်သည်းဆမြင့် lipoprotein (HDL) ကိုလက်စထရောနှင့် triglycerides ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ LDL ကိုလက်စထရောသည်သွေးကြောနံရံများ၏နံရံများပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်သင်္ဘော၏အတွင်းပိုင်းကိုကျဉ်းစေပြီးသွေးစီးဆင်းမှုကိုတားဆီးသည်။ ၎င်းသည်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များကိုမြင့်တက်စေပြီးနှလုံးမူမမှန်ခြင်းနှင့်လေဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့အခြေအနေများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းအကျိုးကျေးဇူးများအပြင် Orlistat သည် LDL ကိုလက်စထရောကိုလျော့ကျစေကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။
အဝလွန်သူသို့မဟုတ်အဝလွန်လူနာ ၂၉၄ ဦး ပါဝင်သောလေ့လာမှုတစ်ခုသည်ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်သွေးရည်ကြည် lipids အပေါ်တွင်ပါ ၀ င်သောသက်ရောက်မှုများကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ၂၄ ပတ်ကြာကုသမှုတွင်နေ့စဉ် ၃၆၀ မီလီဂရမ် Orlistat ကိုသုံးကြိမ်ခွဲသည်။ Orlistat သည်ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်စုစုပေါင်းနှင့် LDL ကိုလက်စထရောကိုသိသိသာသာလျော့ကျစေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် LDL ကိုလက်စထရောကိုလျော့ကျစေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းမှုအကျိုးကျေးဇူးများမှကင်းလွတ်ကြောင်းထပ်မံအတည်ပြုခဲ့သည်။ လူနာ ၆၄၈ ဦး ကိုဖုံးလွှမ်းထားသောနောက်ထပ် ၆ လလေ့လာမှုသည်အစားအစာကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းနှင့် orlistat ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ထုတ်ရန်အာရုံစိုက်သည်။ ရလဒ်များအရသိသာထင်ရှားသောပျမ်းမျှကိုယ်အလေးချိန် ၇.၄ ကီလိုဂရမ်ရှိသည်။ ၎င်းနှင့်အတူစုစုပေါင်းနှင့် LDL ကိုလက်စထရော ၂၅-၃၀ မီလီဂရမ်/dL သိသိသာသာကျဆင်းခဲ့သည်။
Orlistat သည်အ ၀ လွန်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်၌အလွန်အကျွံအဆီစုဆောင်းခြင်းတို့နှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေအခြေအနေများတိုးတက်စေရန်ခိုင်မာသောအထောက်အထားများရှိသည်။ Orlistat အကျိုးသက်ရောက်မှုကို၎င်း၏အုပ်ချုပ်မှုကိုသင့်လျော်သောအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းတို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါလူနာများသည်၎င်းတို့၏သီးခြားလိုအပ်ချက်နှင့်အညီကုသမှုကိုအပြည့်အဝအကျိုးခံစားနိုင်စေသည်။
သူတို့၏ Orlistat ကုသမှုကိုခံစားခဲ့ရသောလူနာများသည်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့မှန်ထဲတွင်ကြည့်။ မလိုလားအပ်သောအဆီ၊ အမာရွတ်နှင့် cellulite တို့မှေးမှိန်လာသည်နှင့်အမျှမြင်သာသောရလဒ်များကိုမြင်ရသည်။
“ ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကငါဆရာဝန်ဆီသွားပြီးကိုယ်အလေးချိန်အရမ်းကျသွားတဲ့အတွက်အကူအညီတောင်းခံခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်သူကကျွန်မကို orlistat မှာထားခဲ့ပြီးအခု ၆ လမှာ ၁၆ ကီလိုဂရမ်ပေါ့ပါးတယ်၊ ငါ ၁၈/၂၀ ကနေ ၁၂/၁၄ ထိအရွယ်ကျသွားပြီ။ ငါလုပ်ဖူးသမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးဘဲ။ " Sez၊ Orlistat အမှုန့်ကို ၁ လမှ ၆ လအထိသောက်ပါ။
Xenical ကို ၁၃.၀၆.၂၀ မှာ ၁၈st ၉ ပေါင်မှာစခဲ့တယ်၊ အခုငါ ၁၆.၅ ပေါင်၊ ၂ လုံး ၈.၅ ပေါင်ရှုံးနေပြီ၊ မင်းကောင်းကောင်းမစားရင်အလုပ်မလုပ်ဘူး။ မင်းအိမ်သာကောင်းကောင်းမှာကောင်းကောင်းမစားရင်အချိန်တိုင်းကောင်းကောင်းစားဖို့မင်းကိုအားပေးတယ်။ ဒါကငါ့ဘ ၀ ကိုတကယ်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ ” Becks၊ Orlistat အမှုန့်ကို ၁ လမှ ၆ လအထိသောက်ပါ
“ ငါဒီဆေးကိုစသောက်တုန်းက ၂၃၅ ပေါင်နဲ့ ၄ ပတ်အတွင်းမှာငါ့အလေးချိန်ကြံက ၂၂၀ ပေါင်ကျသွားတယ်။ တစ်လမှာ ၁၅ ပေါင် ငါလေ့ကျင့်ခန်းတောင်မလုပ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါဖြစ်နိုင်ရင်ဘယ်လောက်ပိုဖြစ်နိုင်လဲတွေးကြည့်ပါ။ ” - Chris, Orlistat Powder ကို ၁ လမှ ၆ လအထိသောက်ပါ။
“ ငါ ၂၀၂၁ မေလကတည်းက orlistat မှာရှိနေခဲ့တာ၊ ဒီနေ့ (၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ) မှာငါ့ရဲ့ drs ခွဲစိတ်မှုကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျသွားပြီး ၇ ပတ်အတွင်းမှာအရမ်းကောင်းတဲ့ကျောက် ၂ လုံးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ ငါအရမ်းခံစားပြီးငါ့ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ကူညီဖို့ orlistat ကိုဆက်သုံးလိမ့်မယ်။ ငါ junk အစာစားတာကိုရပ်တန့်တာကလွဲလို့ငါ့အစားအသောက်ကိုအများကြီးမပြောင်းလဲခဲ့ဘူး! " - အမည်မသိလူနာအား Orlistat အမှုန့်ကို ၁ လမှ ၆ လအထိသောက်ပါ။
အဘယ်ကြောင့် To Cမင်္ဂလာပါ Orlistat အမှုန့် FROM CMOAPI
ကျွန်ုပ်တို့ CMOAPI တွင်ဓာတ်ခွဲခန်းနာရီများစွာအလုပ်လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Orlistat အမှုန့်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏မျှော်မှန်းချက်နှင့်အညီသေချာစေရန်အသေးစားကံကြမ္မာကိုသုံးစွဲခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ orlistat အမှုန့်များ၏အားသာချက်များမှာ
GMP နှင့် DMF လက်မှတ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Orlists Powder ကိုသုံးခြင်းဖြင့်သင်၏အကျိုးကျေးဇူးများကားအဘယ်နည်း။
Orlistat Powder တွင်အမေးအဖြေများ
လူနာသည်အဆီမစားလျှင် ၁. Orlistat အမှုန့်အလုပ်လုပ်သလား။
Orlistat အမှုန့်သည်ခန္ဓာကိုယ်၌စုပ်ယူသောအဆီပမာဏကိုလျှော့ချရန်အလုပ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့် Orlistat ကိုအဆီမပါသောအစာနှင့်တွဲစားခြင်းသည်မထိရောက်ပါ၊ ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သော orlistat ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုရှောင်ရှားရန်ဆေးကိုကျော်သင့်သည်။
၂။ XENICAL ကိုအခြားဆေးဝါးများနှင့် တွဲ၍ ရနိုင်သလား။
warfarin, heparin, apixaban, dabigatran နှင့် rivaroxaban ကဲ့သို့သောသွေးကျဲဆေးများ
HIV ဆေးများဖြစ်သော lopinavir, ritonavir, atazanavir, efavirenz, tenofovir နှင့် emticitabine ကဲ့သို့ HIV ဆေးများ
၃။ XENICAL ကုသမှုသည်မည်မျှကြာသနည်း။
Orlistat ကိုကောင်တာမှတဆင့် (၆၀ မီလီဂရမ်ဆေး Orlistat မှာ) ခြောက်လထက်ပိုမယူရပါ။ Orlistat ကိုသုံးလကြာပြီးမှလူနာသည်သူတို့၏ကိုယ်အလေးချိန်၏အနည်းဆုံး ၅% မဆုံးရှုံးခဲ့လျှင်ကုသမှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သင့်သည်။
၄။ Orlistat အမှုန့်သည်အသည်းပျက်စီးစေသလား။
Orlistat အမှုန့်ကိုကြိုတင်ဆေးခန်းနှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုနှစ်ခုစလုံးတွင်ပြင်းထန်သောအသည်းပျက်စီးခြင်း၏တိုက်ရိုက်အကြောင်းအရင်းအဖြစ်မသတ်မှတ်ရသေးပါ။ သို့သော်ပြင်းထန်သော Orlistat အမှုန့်အသည်းထိခိုက်မှုအချို့ရှားပါးသောဖြစ်ရပ်များကိုသုံးသောသူများကအစီရင်ခံခဲ့သည်။
Orlistat အမှုန့်သည်အသည်း၊ ကျောက်ကပ်နှင့်အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးကိုအဆိပ်အတောက်ဖယ်ရှားရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ car မှပါဝင်သော carboxylesterase-2 ဟုခေါ်သောအရေးပါသောအင်ဇိုင်းတစ်ခု၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုကန့်သတ်နိုင်သည်။ ဤအင်ဇိုင်းကိုတားမြစ်လိုက်သောအခါအရေးကြီးသောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ၏ပြင်းထန်သောအဆိပ်အတောက်များဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
Orlistat အမှုန့်ကို ၀ ယ်ရန်ဘယ်မှာအွန်လိုင်း?
ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကွာခြားသောကြောင့် orlistat ရောင်း ၀ ယ်ထုတ်ကုန်များတွင်ကွဲပြားသော Orlistat အမှတ်တံဆိပ်များရှိသည်။ Orlistat ၏အနိမ့်ဆုံးဆေးများကို OriLat ကဲ့သို့သော Orlistat အမှတ်တံဆိပ်အမည်များတွင်တွေ့ပြီး Orlistat အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများထံမှအွန်လိုင်းမှအလွယ်တကူမှာယူနိုင်ပါသည်။
ပိုမိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် Orlistat အမှုန့်ကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုနှင့်ခြွင်းချက်အရည်အသွေးမြင့်သုံးခြင်းသည်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်လုပ်သူများထံမှအရည်အသွေးမြင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျကုန်ကြမ်းများကိုမှာယူခြင်းသည်အကျိုးရှိသည်။
CMOAPI သည်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ရေရှည်အစဉ်အလာရှိပြီးအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့်ထုပ်ပိုးထားသော orlistat အမှုန့်ကိုအာမခံသောအသိအမှတ်ပြု Orlistat အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီမှာရန် နေရာ Yကျွန်တော်တို့၏ Order
အော်ဒါမှာယူရန်ဤနေရာတွင်ထားပါ CMOAPI အရည်အသွေးမြင့် ၉၉.၇% စင်ကြယ်သောကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသော Orlistat အမှုန့်သည်အဆီကိုအရည်ပျော်စေရန်ဖန်တီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Orlistat အမှုန့်သည် GMP နှင့် DMF လက်မှတ်ရဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များပေးအပ်ကြောင်းအဆုံးစွန်အာမခံသည်။
“ US orlistat တံဆိပ်” (PDF) ။ FDA ။ တံဆိပ်မွမ်းမံမှုများသည်သြဂုတ်လ 2015. 18 Retrievedပြီလ 2018. ရယူရန် NDA 020766 များအတွက် FDA ကအညွှန်းကိန်းစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ
Barbier P, Schneider က F (1987) ။ "tetrahydrolipstatin ၏ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် tetrahydrolipstatin နှင့် lipstatin ၏အကြွင်းမဲ့အာဏာဖွဲ့စည်းမှု" ။ Helvetica Chimica Acta ။ 70 (1): 196-202 ။ Doi: 10.1002 / hlca.19870700124 ။
Bodkin J, Humphry E, McLeod M (2003) ။ "(-) ၏စုစုပေါင်းပေါင်းစပ် - tetrahydrolipstatin" ။ ဓာတုဗေဒ၏သြစတြေးလျဂျာနယ်။ 56 (8): 795-803 ။ Doi: 10.1071 / CH03121 ။
Filippatos, Theodosios & Derdemezis, Christos & Gazi, Irene & Nakou, Eleni & Mikhailidis, Dimitri & Elisaf, မောရှေ။ (2008) ။ Orlistat-Associated ဆိုးရွားသောဆိုးကျိုးများနှင့်ဆေးဝါးများ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - နိုင်ငံတကာဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးဝါးဗေဒနှင့်ဆေးဝါးအတွေ့အကြုံဂျာနယ်။ 31. 53-65 ။ 10.2165 / 00002018-200831010-00005 ။
Sharma က, AM, & Golay, အေ (2002) ။ သွေးတိုးခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါအပေါ် orlistat- သွေးဆောင်ကိုယ်အလေးချိန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ သွေးတိုးရောဂါ၏ဂျာနယ်, 20(9), 1873–1878. doi.org/10.1097/00004872-200209000-00034.
ထုပ်ပိုးခြင်းအပေါ်စာလုံးအသေး၊aနှင့် i (ဆိုလိုသည်မှာ“ allī”) ဘားတန်းနှင့်အတူ Stylized, ဒါပေမယ့်သမားရိုးကျလက်စွဲ၌စာလုံးကြီး။
Zhi J, Melia AT, Eggers H, Joly R, Patel IH (1995) ။ ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများတွင် orlistat၊ lipase inhibitor အားစနစ်တကျစုပ်ယူမှုအားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ J ကို Clin Pharmacol ။ 35 (11): 1103-8 ။ Doi: 10.1002 / j.1552-4604.1995.tb04034.x ။ PMID 8626884 ။